Xai Yak Techonology: အာရုံငါးပါးသုံးပြီး တိုးတက် အောင်မြင်နိုင်စေဖို့ ပိုပြီး စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်စွမ်းရှိချင်ရင်အထိအတွေ့အာရုံကိုသုံးပြီး . . .
အာရုံငါးပါးသုံးပြီး တိုးတက် အောင်မြင်နိုင်စေဖို့ ပိုပြီး စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်စွမ်းရှိချင်ရင်အထိအတွေ့အာရုံကိုသုံးပြီး . . .
တစ်ဖက်လူရဲ့ လက်ဖမိုးကို ထိတွေ့ခြင်းက သူနဲ့ပိုပြီး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သလို သူ့စိတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်စေတာကြောင့် သင့်ကို အလိုလိုပိုပြီး နှစ်သက်လာမိစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူ့အနေနဲ့ သင့်ဆန္ဒကို လိုက်လျောကာ အတိုက်အခံ ပြုလိုစ်ိတ်လည်း သူ့မှာ မဖြစ်ပေါ်တော့ပါဘူး။
သင်အလုပ်သွားလျှောက်တဲ့အခါ အရည်အချင်းရှိတဲ့ အလုပ်ရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သင့်ကို ပထမဆုံး သတိပြုမိတဲ့ အချက်တွေထဲမှာ သင်ရဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ ပုံစံလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အများနဲ့မတူ တစ်မူထူးကာ ကိုယ့်ကို သတိထားမိစေဖို့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရာမှာ သင်ရဲ့လက်ညှိုးကို တစ်ဖက်လူရဲ့ လက်ကောက်ဝတ်ထိ
ရောက်အောင်ထားပြီး နှုတ်ဆက်ပါ။ ဒီလို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အခါ သင်ရဲ့လက်မနဲ့ လက်ညှိုးကြားရှိ အရေပြားက တစ်ဖက်လူရဲ့ အဲဒီအရေပြားနဲ့ ထိမိစေတာကြောင့် သူ့မသိစိတ်ထဲမှာ သင့်ကို အလိုလို ယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။
သိပ်ကြိုးစားစရာမလိုဘဲ ၀ိတ်လျှော့ချင်ရင်အနံ့ခံအာရုံကိုသုံးပြီး . . .
ဇီဝရုပ် ဖြစ်ပျက်မှုကောင်းအောင် လုပ်ပါ
လေ့လာချက်တစ်ခုအရ လမ်းလျှောက်ခြင်းလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်နေစဉ် ထောပတ်ပေါက်ပေါက် အနံ့ရှူမိပါက ကယ်လိုရီ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်း ပိုလောင်ကျွမ်းမှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ ပေါက်ပေါက်နံ့က ဇီဝရုပ် ဖြစ်ပျက်မှုနှုန်း မြန်စေနိုင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းစေနိုင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်း Endorphin ဟော်မုန်းတွေကို ထွက်ရှိစေနိုင်တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပိန်ချင်ရင် ပေါက်ပေါက်ဆိုင်နားမှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ပေါက်ပေါက် မစားမိအောင်တော့ စိတ်ထိန်းပေါ့နော်။
မုန့်တွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး တစွတ်စွတ်စား ဖြစ်နေပါသလား။ မီးဖိုချောင် နဲ့ ထမင်းစားခန်းထဲမှာ ဗယ်နီလာအနံ့ လေထုသန့်စင်ဆေးရည် ဖျန်းလိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ဗယ်နီလာအနံ့ အမွှေးတုံး ထည့်ထားပါ။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်အရ ဗယ်နီလာအနံ့ ရှူသူတွေဟာ သရေစာတွေ၊ အ၀စာတွေ စားချင်စိတ် တစ်ဝက်လောက် လျော့ကျတာကြောင့် လေးပတ်အတွင်း ပျမ်းမျှ ငါးပေါင်လောက် လျော့ကျသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဗယ်နီလာအနံ့ဟာ ချိုချိုအီအီ အနံ့ဖြစ်တာကြောင့် အစာစားစရာမလိုဘဲ စိတ်ဆန္ဒပြည့်ဝမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်း Serotonin ဟော်မုန်းတွေ ထွက်ရှိစေတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အနံ့ကိုရှူပြီး အလိုလို ဗိုက်ပြည့်သွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြဿနာတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူဖြေရှင်းချင်ရင်အကြားအာရုံကိုသုံးပြီး . . .
လေ့လာချက်တစ်ခုအရ ဂန္ထ၀င်တေးဂီတကို လေ့လာသင်ကြားနေတဲ့ ကလေးတွေဟာ မသင်ကြားတဲ့ ကလေးတွေထက်စာရင် စာလုံးတွေကို မှတ်မိနိုင်စွမ်း ပိုရှိကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဦးနှောက် အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ ဂီတကို လေ့လာသင်ယူတဲ့ အစိတ်အပိုင်းနဲ့ တူတူပဲ ဖြစ်နေတာကြောင့် ဂီတကို နားထောင်ပါက မှတ်ဉာဏ် ပိုကောင်းနိုင်စေပါတယ်။
ငွေစာရင်းတွက်စရာရှိသလား။ ဒရမ်သံ သိသာတဲ့ သီချင်းဖွင့်ပြီး တွက်လိုက်ပါ။ လေ့လာချက်အရ Beat ခပ်ပြင်းပြင်း တီးလုံးသံစဉ်တွေကို နားထောင်ခြင်းဖြင့် အတွက်အချက် ပြုလုပ်ရာမှာ ကိန်းဂဏန်း ကိုင်တွယ်ရာမှာ ပိုပြီး ကျွမ်းကျင်မှု ရှိစေနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။ တီးလုံးတွေက သင်္ချာတွက်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဦးနှောက် အစိတ်အပိုင်းကို လှုံ့ဆော်မှု ပြုလိုက်တာကြောင့် ကိန်းဂဏန်း တွက်ချက်ရာမှာ များစွာ အထောက်အကူ ပြုစေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အပြာရောင်ကို ငေးကြည့်ခြင်းဟာ စိတ်တင်းကျပ်မှုတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတာတွေအပေါ်၊ အတွေးသစ်၊ အမြင်သစ်တွေအပေါ် ပိုပြီး မျက်စိပွင့်၊ နားပွင့်စေပါတယ်။ သုတေသန ပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာချက်အရ လေ့လာရာမှာ ကူညီပေးသူတွေကို ဒီဇိုင်းတီထွင် ဖန်တီးမှု လုပ်ငန်းတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခိုင်းတဲ့အခါ အပြာရောင် အခန်းထဲမှာ ပြုလုပ်သူတွေဟာ သာမန်အရောင် ဖျော့ဖျော့ အခန်းထဲမှာ ပြုလုပ်သူတွေထက်စာရင် အိုင်ဒီယာ အသစ်အဆန်းတွေ ပိုပြီးထွက်ရှိကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ စိတ်တင်းကျပ်မှုမရှိဘဲ သက်သောင့် သက်သာရှိနေပါက အိုင်ဒီယာအသစ်တွေ ပိုပြီး စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
လေ့လာချက်တစ်ခုအရ သဘာဝရှုခင်းအလှကို တွေ့ရနိုင်တဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေ နားမှာထိုင်တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေဟာ အလုပ်ပို လုပ်နိုင်သလို ပိုပြီး မြန်ဆန်ကောင်းမွန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ တခြား လေ့လာချက်အရ နေ့လယ်နေ့ခင်းဘက်မှာ သဘာဝတရားနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ အမှတ်ပိုကောင်းကြသလို အာရုံစူးစိုက်မှုလည်း ပိုကောင်းကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သဘာဝအလှတရားကို အာရုံခံစားကာ အလုပ်ပိုတွင်ကျယ်အောင် ကြိုးစားပါ။
အာရုံစူးစိုက်မှု အားကောင်းချင်ရင်အရသာခံ အာရုံကိုသုံးပြီး . . .
အားနည်းပင်ပန်းနေတယ်လို့ ခံစားရပါက ငရုတ်သီးစပ်စပ်ပါတဲ့ အစားအစာကို စားလိုက်ပါ။ ငရုတ်သီးမှာ Capsaicin ဆိုတဲ့ ဓာတ်ပါရှိပြီး ပါးစပ်ကို ပူစေလောင်စေတာကြောင့် ဦးနှောက်က သင့်မှာ နာကျင်မှုဝေဒနာ ခံစားနေရတယ်လို့ မှတ်ယူကာ သင့်ကို သက်သာစေနိုင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းစေနိုင်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေ ထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစပ်စားပြီး ခဏအကြာမှာ လန်းဆန်းလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် အစပ်စာက ခွန်အား တိုးစေနိုင်တဲ့ အာရုံကြောကို သွားပြီးလည်း လှုံ့ဆော်ပေးလေ့ ရှိတာကြောင့် အားဖြည့်ပေးပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာ ဆန့်ကျင်ဘက် အရသာနှစ်မျိုး တွဲစားခြင်း (ဥပမာ-ချိုချဉ်၊ ဟင်းချိုသောက်ခြင်း) က အာရုံကြောတွေကနေ တစ်ဆင့် ဦးနှောက်ဆီ ဆန့်ကျင်ဘက် အသိပေးချက်တွေကို ပို့ပေးလိုက်ပါ တယ်။ အဲဒီအခါ ဦးနှောက်ကနေ သင်ဘာကို အာရုံခံပြီး စားနေသလဲဆိုတာကို သိရှိဖို့ ကြိုးစားလိုက်ရတာကြောင့် ဦးနှောက်ကို နှိုးလိုက်သလိုဖြစ်ကာ လူကလန်းဆန်းပြီး အားအင်တွေ ပြည့်ဝသွားသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ အာရုံငါးပါးရဲ့ အသုံးဝင်ပုံတွေကို သိပြီဆိုတော့ သင့်ဘ၀ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်စေဖို့ အာရုံငါးပါးကို အသုံးချနိုင်ကြပါစေနော်။
Posted by Xai Yak at 19:36